Boko Xaraam awood ciidan oo keliya ma looga adkaan karaa? - BBC News Somali
Boko Xaraam awood ciidan oo keliya ma looga adkaan karaa?
Madaxwynaha Faransiiska, Francois Hollande, ayaa ka sheegay shir madaxeedka looga arrinsanayo xagjirnimada ee ka socda Nigeria, in khatarta ururka Boko Xaraam ay weli taagan tahay, walow guul dhanka milateriga ah laga gaaray dagaalka lagula jiro.
Mr Hollande ayaa u sheegay madaxda ku shirsan Abuja inuu soo dhaweynayo iskaashiga caalamiga ah ee lagu jabinayo ururkaasi.
Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ka digay xiriirka sii xogeysanaya ee ay Boko Xaraam la leedahay ururka isku magacaabay dowladda Islaamka, waxaana uu sheegay in taasi ay khatar ku tahay xasiloonida Galbeedka iyo Bartamaha Afrika.
Haddaba walaac intee la eg ayay dalalka gobolkaasi ka qabaan xiriirka ka dhexeeya labada urur? Waxaa su'aashaasi iyo kuwo kale aan weydiinay Dr Cabdiwahab Sheekh Cabdisamad, oo u warramay Ciise Xaaji Cabdulle.